Kaagaz (2021) | MM Movie Store
2021 မှာ အသဈထှကျထားတဲ့ ဇတျကားကောငျးလေးတဈကား ရှိတယျဗြ Salma Khan ထုတျလုပျရေးက ထုတျလုပျထားတာပါ။၇.၉ ထိ ဘာကွောငျ့ရခဲ့လဲ။ ပထမဆုံးက ဒီဇတျကားက ၇၀-၉၀ ခုနှဈပိုငျးမှာ ဇတျအိမျတညျပွီးဘဏျကခငြှေရေဖို့ ကွိုးစားရငျး ဒုက်ခရောကျခဲ့ရတဲ့ လယျသမားတဈယောကျ ဖွဈရပျမှနျကို အခွခေံထားတာပါ။
ဇတျလမျး တဈလြှောကျလုံးလဲ ပါတျဝနျးကငျြရဲ့ ငွိုငွငျစကားတှေ မိသားစုတှငျး သစ်စာမဲ့တှနေဲ့ဘကျပေါငျးစုံ စိတျဓာတျကစြရာတမြိုးစုံကို ခံရတဲ့အခါ ဖွဈပျေါလာတဲ့ သူ့ရဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ခံစားခကျြတှကေိုဖျောပွပုံတှကေ မာစတာပိဈပါပဲ။
ဒါ့အပွငျ ရိုးသား ပြျောရှငျတတျတဲ့လူတဈယောကျအဖွဈကနေ ခေါငျးမာပွတျသားသူတဈယောကျအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားရပုံကိုနိမျ့ခညျြတဈခါ မွငျ့ခညျြတဈလှညျ့နဲ့ Pankaj Tripathi ရဲ့ သရုပျဆောငျ မူတှကေဆှဲချေါသှားပါလိမျ့မယျ။
ဘာရသျလားလျ ဆိုသူဟာ တီးဝိုငျးခေါငျးဆောငျတဈဦး ဖွဈပွီးသူ့ရဲ့အလုပျကတော့ မင်ျဂလာပှဲတှေ ဘာသာရေးပှဲတှမှော လိုကျလံ တီးခတျပေးရပါသတဲ့တဈနကေ့တြော့ ပုဏ်ဏားတဈယောကျနဲ့ စကားစပျမိရငျးကနပေုဏ်ဏားက ဆိုငျကိုထပျခြဲ့ဖို့ ပွောလာပမေယျ့ဘာရသျလားလျက သူ့မှာ ပိုကျဆံမရှိကွောငျးပွနျရှငျးပွတော့ပုဏ်ဏားကွီးက ဘဏျခြေးငှယေူပွီးလုပျဖို့ အကွံပေးလိုကျပါတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ ဘဏျခြေးငှေ မယူခငျြယူခငျြနဲ့ သှားယူမယျဆိုပွီးသှားတော့ခြေးငှယေူဖို့ရာ လကျဝယျပိုငျဆိုငျမှုရှိတဲ့ ပစ်စညျးတဈခုခု ဘဏျကိုပွဖို့လိုမယျဆိုတာသိရပွီးသူ့ဦးလေးမိသားစုနဲ့ စပျတူ အမှရေထားတဲ့ မွကှေကျရဲ့ စာခြုပျကိုယူဖို့ ထှကျလာခဲ့ပါတယျဟိုကိုရောကျတော့ မွကေ သူ့နာမညျနဲ့ မဟုတျတော့ကွောငျးသူကအစိုးရ စာရှကျပျေါမှာသသှေားပွီဖွဈကွောငျးသိလိုကျရတဲ့အခါ …..
နောကျခံသီခငျြးတှကေလဲ အတျောလေးကောငျးပါတယျ။ Mizarpu ထဲက မီဇာပူးထဲက ဖိုကျတာကွီးကအဓိကမငျးသားအဖွဈ သရုပျဆောငျထားပါတယျ ဘာရသျလားလျတဈယောကျ ဘယျနညျး ဘယျပုံနဲ့ သူ့ကိုယျသူ အသကျရှငျနကွေောငျးသကျသပွေမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတျကားထဲမှာပဲ ရှုစားပေးကွပါလို့ ပွောကွားရငျး ….
2021 မှာ အသစ်ထွက်ထားတဲ့ ဇတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကား ရှိတယ်ဗျ Salma Khan ထုတ်လုပ်ရေးက ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။၇.၉ ထိ ဘာကြောင့်ရခဲ့လဲ။ ပထမဆုံးက ဒီဇတ်ကားက ၇၀-၉၀ ခုနှစ်ပိုင်းမှာ ဇတ်အိမ်တည်ပြီးဘဏ်ကချေငွေရဖို့ ကြိုးစားရင်း ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ လယ်သမားတစ်ယောက် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားတာပါ။
ဇတ်လမ်း တစ်လျှောက်လုံးလဲ ပါတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ငြိုငြင်စကားတွေ မိသားစုတွင်း သစ္စာမဲ့တွေနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံ စိတ်ဓာတ်ကျစရာတမျိုးစုံကို ခံရတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြပုံတွေက မာစတာပိစ်ပါပဲ။
ဒါ့အပြင် ရိုးသား ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ ခေါင်းမာပြတ်သားသူတစ်ယောက်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားရပုံကိုနိမ့်ချည်တစ်ခါ မြင့်ချည်တစ်လှည့်နဲ့ Pankaj Tripathi ရဲ့ သရုပ်ဆောင် မူတွေကဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဘာရသ်လားလ် ဆိုသူဟာ တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အလုပ်ကတော့ မင်္ဂလာပွဲတွေ ဘာသာရေးပွဲတွေမှာ လိုက်လံ တီးခတ်ပေးရပါသတဲ့တစ်နေ့ကျတော့ ပုဏ္ဏားတစ်ယောက်နဲ့ စကားစပ်မိရင်းကနေပုဏ္ဏားက ဆိုင်ကိုထပ်ချဲ့ဖို့ ပြောလာပေမယ့်ဘာရသ်လားလ်က သူ့မှာ ပိုက်ဆံမရှိကြောင်းပြန်ရှင်းပြတော့ပုဏ္ဏားကြီးက ဘဏ်ချေးငွေယူပြီးလုပ်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဘဏ်ချေးငွေ မယူချင်ယူချင်နဲ့ သွားယူမယ်ဆိုပြီးသွားတော့ချေးငွေယူဖို့ရာ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ဘဏ်ကိုပြဖို့လိုမယ်ဆိုတာသိရပြီးသူ့ဦးလေးမိသားစုနဲ့ စပ်တူ အမွေရထားတဲ့ မြေကွက်ရဲ့ စာချုပ်ကိုယူဖို့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဟိုကိုရောက်တော့ မြေက သူ့နာမည်နဲ့ မဟုတ်တော့ကြောင်းသူကအစိုးရ စာရွက်ပေါ်မှာသေသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါ …..
နောက်ခံသီချင်းတွေကလဲ အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ Mizarpu ထဲက မီဇာပူးထဲက ဖိုက်တာကြီးကအဓိကမင်းသားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဘာရသ်လားလ်တစ်ယောက် ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ အသက်ရှင်နေကြောင်းသက်သေပြမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာပဲ ရှုစားပေးကြပါလို့ ပြောကြားရင်း ….
Cheating Wife – Link 1
The Great (Season 1) အပိုငျး (၂)